merolagani - अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा बढ्यो, ईपीएस कति?
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा बढ्यो, ईपीएस कति?
May 11, 2022 05:19 AM Merolagani
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (AHPC) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४०.१८ प्रतिशत बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
कम्पनीको आम्दानी बढेसँगै खुद नाफा बढ्न पुगेको हो।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी ६२.८७ प्रतिशत बढेको छ भने कुल आम्दानी ३०.८४ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा ३२.८३ प्रतिशत बढेको छ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी समीक्षा अवधिमा ६५ प्रतिशत बढेको छ भने जगेडा कोष ६४.०२ प्रतिशत बढेको छ।
नाफा बढेपनि कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी भने घटेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यस्तो आम्दानी १ रुपैयाँ ३६ पैसा घटेर ७ रुपैयाँ ७१ पैसामा झरेको छ। चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०९ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ५३.५८ गुणा रहेको छ।
बुटवल पावरको विद्युत बिक्री आम्दानी बढेपनि नाफा घट्यो
May 10, 2022 08:17 AM
नाफासँगै बढ्यो सानिमा माइ हाइड्रोपावरको ईपीएस
May 09, 2022 02:25 PM
वित्तीय आम्दानी बढेसँगै मध्य भोटेकोशीको नोक्सानी घट्यो
चिलिमे जलविद्युतको विद्युत बिक्री आम्दानी करिब स्थिर, नाफा कति?
May 09, 2022 09:30 AM
अन्य आम्दानी घटेपछि हिमालयन उर्जा नोक्सानीमा
आँखुखोला जलविद्युतको नाफामा उल्लेख्य सुधार